Tani waa goosgooska filimka cusub ee Apple TV-ga ah + Night Planet | Waxaan ka socdaa mac
Kani waa duubista filimka cusub ee Apple TV-ga ah ee loo yaqaan 'Night Planet'
Apple wuxuu soo saaray trailer cusub oo rasmi ah taxanahiisa cusub ee Night Planet: oo midab buuxa leh, kaas oo xayawaanku waa halyeeyada isku mid ah oo aan la kulmi doonno shaqo aad u fiican oo ah tafatir, cod iyo gaar ahaan midab.
Meeraha habeenkii: midab buuxa, wuxuu siiyaa adeegsadaha Apple TV + muuqaal habeenkii xayawaanka sida qorraxdu u dhacdo ilaa ay mar kale u soo baxdo. Tixdani waxay u oggolaanaysaa xayawaanada jecel inay ku raaxaystaan ​​dabeecadaha xayawaanka habeenkii, oo uu sheegay Tom Hiddleston ayaa noo keenaya xayawaanka si yar oo la arkay.
Isugeyn 6 qaybood oo qiyaastii 30 daqiiqo ah midkiiba, Apple wuxuu doonayaa inuu dunida xayawaanka ku keeno gurigiisa laakiin tan habeennimo. Taxanahan cusub ee dokumentariga ah waxaa la bilaabay maalmo ka hor hadana waa saxiix tus muuqaalka:
Runtu waxay tahay inay jiraan waxyaabo badan oo xayawaan ah oo ku jira adeeggan Apple iyo tan waxay na tusayaan nolosha habeennimo ee dhowr ka mid ah iyo sida ay u noolaadaan. Abka Apple TV +, adeegsadayaasha waxay ku raaxeysan karaan sacab muggiis oo wanaagsan oo taxane ah iyo dokumentiyo documentary ah. Waa run in aysan kujirin heerka adeegyada kale ee fiidiyowga qulqulaya in kasta oo ay run tahay in maalin kasta ay soo kordhayaan waxyaabo badan oo la heli karo, labadaba asalka Apple laftiisa iyo filimada xuquuqda loo iibsaday labadaba.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Kani waa duubista filimka cusub ee Apple TV-ga ah ee loo yaqaan 'Night Planet'
Tufaaxu "wuu dharbaaxayaa Hyundai" hadalka badan